I-Instaradio: Uhlelo lokusebenza lokwenza i-Online Rario yamahhala | Izindaba zamagajethi
I-Instaradio: Dala igumbi lethu lomsakazo online ngefoni yakho ephathekayo
Uyathanda imisakazo eku-inthanethi ukulalela kusuka kudivayisi yakho yeselula? Impendulo yabantu abaningi ingahle ibe ngu "yebo" ngoba lapho, sizoba nethuba lokujabulela umculo omnandi, ingqungquthela emnandi noma simane nohlelo lapho izihloko ezithokozisayo zethu nabo bonke abanye abantu zenziwa zaziwe.
Uma esikhundleni sokubuza ukuthi yini ebesiyiphakamisile ngaphambi kokuthi sisho Ungathanda ukudala umsakazo oku-inthanethi kusuka kudivayisi yakho yeselula? Mhlawumbe impendulo yehluke kakhulu kulokho esishilo esigabeni esedlule, ngoba futhi singaba nesihloko esithandekayo esingabelana ngaso nabanye kodwa nokho asikwazanga ukwenza lokho ngenxa yobukhosi bemisakazo eyahlukene eku-inthanethi ephatha cishe yonke into futhi kuphi, isikhala obukade uzama ukusithola asinikeziwe. Ngokusizayo sibonga leli thuluzi elibizwa nge-Instaradio ungaqala kalula ukuzikhangisa ekuxhumaneni nomphakathi ngokwakha umsakazo wakho oku-inthanethi.
1 I-Instaradio isebenza kanjani kumadivayisi wethu weselula?
2 Ukubukeza nokwakha izihloko zabanye nge-Instaradio
I-Instaradio isebenza kanjani kumadivayisi wethu weselula?
Le yingxenye ethakazelisa kunazo zonke kukho konke, noma kunjalo, uzodinga umakhalekhukhwini kanye nohlobo olufanele ukufaka kuzo; Sincoma ukuthi uqale kuqala kuwebhusayithi esemthethweni yonjiniyela, lapho uzothola khona isikrini esifana ncamashi naleso esisibeke phezulu. Izinguqulo ezimbili zihlelwe ngokusobala lapho, okungukuthi, ueyodwa ye-Android nenye ye-iOS; Kumele sisho kafushane ukuthi isikhombimsebenzisi sethuluzi lifanelana kahle nezingcingo zomakhalekhukhwini hhayi nethebhulethi, okusho ukuthi ngaso sonke isikhathi kuzofanele siyisebenzise ime mpo.
Lapho sisebenzisa i-Instaradio ngemuva kokuyilayisha futhi sayifaka, sizothola isikrini esamukelekile, esizosikisela ukuvula i-akhawunti yamahhala nensizakalo yabo. Ngenxa yalokhu, singasebenzisa:
Inethiwekhi yethu yokuxhumana nabantu kuFacebook.
Sincoma ukuthi usebenzise noma yimaphi amanethiwekhi womphakathi amabili esiwabalulile ngenhla ngoba ngalokhu, sizokugwema ukusebenzisa ifomu elinzima ukuthi izikhathi eziningi, icela imininingwane esingafuni ukuyinika. Ngaphezu kwalokho, ngamanethiwekhi omphakathi sizoba nethuba lokuthi qala ukumema abangani bethu ukuthi balalele esizoqala ukukuhlela emsakazweni online. Ngalesi sizathu, kufanele uvumelanise i-Instaradio nenethiwekhi yokuxhumana nabantu onokuxhumana okuhle kakhulu futhi lapho kukhona khona oxhumana nabo nabangane abaningi abazokwabelana ngesihloko esithile.
Isinyathelo esilandelayo okufanele usilandele nge-Instaradio sikuphrofayili yakho, lapho kufanele ube nobuciko khona ukuze wonke umuntu akubheke ngesikhathi esithile. Ngokwesibonelo, isithombe, incazelo encane yakho futhi, ukumema abangani onabo ekuxhumaneni nomphakathi kuyisinyathelo sokuqala ekwakheni umsakazo wakho oku-inthanethi namadivayisi eselula.
Ukubukeza nokwakha izihloko zabanye nge-Instaradio
Lapho usuqedile ukumisa i-akhawunti yakho ngokwalokho esikusikisele ngenhla, uzongena ngokushesha kusixhumi esibonakalayo se-Instaradio futhi lapho, izinketho ezimbalwa zizokhonjiswa ngaphezulu kwayo, okuzokusiza:
Dlulisa amehlo ekudalweni kwabanye abasebenzisi be-Instaradio.
Sebenzisa injini yokusesha yangaphakathi ukuthola umsakazo othile (noma khetha eyodwa ethandwa kakhulu ebhalwe lapho).
Buyekeza umsebenzi odala umsakazo owudalile.
Qala ukusakaza izimpawu zakho zokuhlola ngomsakazo oku-inthanethi.
Uzothola le nketho yokugcina ukukhetha isithonjana semakrofoni (umbuthano obomvu) etholakala ngasekupheleni kwazo zonke izinketho kubha ephezulu yesixhumi esibonakalayo. Uma ukhetha, uzothola umlayezo okuxwayisa ukuthi usuzoqala ukurekhoda ku-Instaradio. Akudingeki ukhathazeke ngendawo yokugcina kudivayisi yakho yeselula, ngoba konke okurekhodayo kuzolondolozwa kumasevisi walolu hlelo lokusebenza oluku-inthanethi.
Ungakhuluma inqobo nje uma ufuna nangezihloko ozilawula kakhulu, okuthile okungabuyekezwa kamuva yilabo abavakashela iphrofayili yakho. Kungakuhle ukuthi ufeze lo msebenzi endaweni ethule lapho kungekho msindo omkhuluUma ikhwalithi yokuqoshwa kwakho ingcono, uzothandwa kakhulu yisiteshi sakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » I-Instaradio: Dala igumbi lethu lomsakazo online ngefoni yakho ephathekayo
[Umbono] Ukushiseka ngokweqile nokuvikelwa
I-Pricepirates: Thola umkhiqizo ngezindleko eziphansi kakhulu emakethe